Ny fiteny portiogey amin'ny Skype an-Tserasera antokony ny fiteny portiogey avy amin'ny Skype
Ny fiteny portiogey amin’ny Skype an-Tserasera antokony ny fiteny portiogey avy amin’ny Skype
Ny fiteny portiogey dia iray amin’ireo tsara indrindra ny teny eto amin’izao tontolo izao nolazain maherin’ny tapitrisa ny olona manerana izao tontolo izao. Anarana dia ny tompon-tany amin’ny fiteny tsy ho an’ny mponina ao i Portugal sy i Brezila, fa koa ho an’ny mponina any Angola, Cape Verde, Mozambika, Makaô, Equatorial Guinea, sns. Ny melodious fiteny portiogey namorona maro be ny hira ao amin’ny izao tontolo izao, manomboka avy any Portiogaly ary mifarana amin’ny Breziliana ny Samba. Breziliana tantara mitohy amin’ny teny portiogey ny baolina kitra sy ny Breziliana fetibe dia tsy afaka miala ny fo tsy miraika. Ny fiteny portiogey dia ara-drariny antsoina hoe ny teny mamy sy afaka hanamarina izany amin’ny alalan’ny manomboka miteny izany. Izay. Anarana ho mahaliana ny olona tia tantara sy ny tsy manam-paharoa ny maritrano ao Portiogaly, gourmets sy ny connoisseurs ny toetra divay, ireo rehetra izay manonofy, fara fahakeliny, indray mandeha mitsidika ny any Rio de Janeiro, sy ny mahafinaritra.
Anarana dia ny fahafito malaza indrindra eran-tany sy manintona kokoa sy kokoa noho ny fiderana sy sonority tia ny fiteny vahiny. Tsy misy ahiahy fa Portiogaly dia lasa miha malaza eo Breziliana mpandraharaha, ary koa teo anivon ireo mpizaha-tany, ny toetra tia sy gourmets. Tao anatin’ny taona vitsivitsy dia nitombo ihany koa ny lazan’i Brezila ny mozika Breziliana ny fampiasana ny sarimihetsika, ny Breziliana alina sy mikarakara fety isan-taona, tanàna Breziliana dia miha Breziliana sekoly ny Samba, capoeira sy ny fora. Matetika ny mpizaha tany mba hitsidika ity firenena vahiny sy ny lehibe ny fahefana sy ny kolontsaina isan-karazany. Brezila sy Brezila mizara ara-toekarena sy ara-politika ny fifandraisana, toy ny hafa firenena andalam-pandrosoana, India, Shina ary Afrika Atsimo, Brezila, ary Brezila endrika ara-toekarena ny firaisan-kina, antsoina hoe BRICS. Izay.
Mazava Ho Azy Fa Ao Noteneniko
Ny antony. Zavatra roa tsara tarehy firenena izay bebe kokoa hiteraka ny liana ny mpizaha tany. Portiogaly miantso ny tantara, ny maritrano, hazan-dranomasina sy ho mahonon-tena toetr’andro. Brezila, kosa mahavariana singularity sy ny famirapiratry ny mazava, toa ny Samba, hafakely ny endriky ny, ny fisokafana sy sariaka Breziliana. Ny dia ireo firenena afaka ny ho tonga bebe kokoa sy tsy hay hadinoina raha toa Ianao dia manana ny fahafahana mifandray amin’ny ny anarana sy ny Breziliana ny teratany portigey. Noho izany, manao hoe (tsara maraina), na.’ (tsara.) amin’ny fandraisana ny, dia manao ny andro sambatra kokoa, satria Ianareo dia azo antoka fa mahatakatra ny zavatra lazainao ho setrin’izany, ary Ianao tsy manana uncomprehending tsiky. Izay. Mazava ho azy fa ‘anarana ho an’ny mpizahatany’ ny tiany ny olona rehetra izay mandeha mitsidika Portiogaly na i Brezila.
Mazava ho azy fa mikendry mba hanomana Anareo ho an’ny andavanandro ny toe-javatra
← Ny Fiarahana ho an'ny fifandraisana matotra